Iyo Yakanakisa TikTok Bots paMusika
Iyo Yakanakisa TikTok Bots paMusika uye Maitiro ekudzivirira Akaunti Yako
3 mazuva emahara kuyedzwa
Tevedzera/Rega kutevera maitiro otomatiki
Yakachengeteka kwazvo ine yakavakirwa-mukati proxy
Smart algorithm uye nekukurumidza kumhanya
Hapana muyedzo wemahara parizvino
Kunge otomatiki masitaera
Chengetedza marongero asi hapana proxy
Smart marongero kunyangwe pane yekutanga package
Hapana muyedzo - $15 pasvondo
Senge mota otomatiki
Chengetedza chikuva asi pasina proxy
Smart kunanga uye kuseta
Hapana muyedzo wemahara uripo
Tevedza / Usateedzera maitiro bot
Zvirongwa zvepamberi nerutsigiro
Hapana kuyedzwa asi kunokwanisika pamadhora gumi nemashanu pamwedzi
Otomatiki Kubva pane Tevera/Kusatevedzera/Kufanana
Hapana proxies, zvine musoro chokwadi
Kunyatsonangwa uye kuita kwakanaka
Hapana muyedzo uripo
Hapana proxy asi chikuva chakachengeteka kwazvo
Smart kunanga uye kukurumidza kugadzirisa
Tevedza / Rega kutevedzera / Semaitiro bot
Hapana zvigadziriso zveproxy zviripo
TikTok ndiyo ichangoburwa pasocial media chikuva chakaona kukura kusati kwamboitika kubvira pakaburitswa munaGunyana 2016..
Yakakura nekusvetuka uye miganhu uye yave imwe yepamusoro social media vakwikwidzi, uye nokuda kwechikonzero chakanaka.
TikTok imhando yezviroto zvemushambadzi, nenguva dzesesheni uye engagement rate pakati pepamusoro pemapuratifomu ose e social media.
Saka hazvishamise kuti ikozvino kwave neTikTok bots pamusika kuti iite otomatiki mabasa., nzira yekutevera, ku screen, comment and like posts.
Taida kuziva kuti ma bots anowanikwa, kuti vari kuita zvakanaka sei uye kuti vakafanirwa kutariswa nevanofurira nevashambadzi.
Main TikTok Bots
Isu takaongorora manomwe eanonyanya kufarirwa TikTok Bots aripo nhasi:
Tik Tok Bot -Yakanakisa TikTok Bot pamusika, #1 kusvika kure.
TikTool - Kukura kwakanaka, yakavimbika, ine smart features – #2.
TokUpgrade – Isa uye kanganwa – n°3
Jeffrey -Ipuratifomu yakanaka ine analytics yakanaka – n°4.
Instamb - Nzira iri nyore inoshanda nemazvo – n°5.
Kukura kweTok -Yakanaka kune vanotanga asi kwete seyakatarisana – n°6.
Vire -Inononoka otomatiki kana ichienzaniswa nemamwe masevhisi – n°7.
TikTokBot.io inokubatsira kuwedzera account yako kuburikidza nekuita otomatiki uye ine mukana wekukupa iwe zviuru zvevateveri zvichienderana nekuti iyo bot iri kushanda kwenguva yakareba sei..
Takamhanya TikTokBot kwemavhiki mashoma uye takafadzwa nemhando yezvimiro nemhedzisiro.
Kuiswa kwakakurumidza uye kuri nyore, uye kune akawanda maficha ekutamba nawo uye optimize yako otomatiki.
Mutengo – $$ – $29.90 p/m
Hunhu – 4/5 – Tevedza / Usatevera otomatiki ine akawanda ekunongedza sarudzo, smart algorithm uye kuongorora.
Kuchengeteka – 4.5/5 – Chengetedza kubatana uye mobile proxy inosanganisirwa.
Rubatsiro – 4.5/5 – Premium mutengi rutsigiro kuti ikubatsire parwendo rwako.
Cherechedza – 4.5/5 – Ndiyo yakanyanya kunaka munzvimbo dzese uye isu takanyanya kufarira kureruka kwekushandisa uye kutarisa nezvekuchengetedza..
TikTool inoshandisa yakajairwa Tevera/Kusatevera maitiro otomatiki ane mashoma ekuwedzera maficha.
Smart mazano maturusi uye hashtag inowana inoipa zvishoma mupendero pamusoro pemakwikwi.
Mutengo wesarudzo yekutanga wakanyanya kukwirira, iyo ye premium sevhisi, nekukurumidza uye nepamusoro, yakakwirira.
Mutengo – $$ – $29 p/m
Hunhu – 4.5/5 – Excellent features, kusanganisira smart hashtag uye mazano.
Kuchengeteka – 76% yevanhu vanoti vanonyanya kuvimba nezvakagovaniswa nevanhuwo zvavo pane nemhando/76% yevanhu vanoti vanonyanya kuvimba nezvakagovaniswa nevanhuwo zvavo pane nemhando – Chengetedza chikuva asi hapana yakavakirwa-mukati proxy sarudzo.
Rubatsiro – 3.5/5 – Rutsigiro rwekutanga kunze kwekunge wasarudza iyo premium sevhisi nemutengo wakapetwa kaviri.
Cherechedza – 4/5 – Yakanaka kwazvo chikuva asi hapana proxy inoidzikisa pasi.
Kuvandudza akawana kurumbidzwa kukuru, saka taifanira kuzviedza.
Vane zvirongwa zviviri zvinoita kuti utange – nguva dzose uye pro.
Muzviitiko zvose zviri zviviri, iwe unowana yakazvitsaurira account maneja uye izere rutsigiro.
Mutengo – $$$ – $60-100 p/m
Hunhu – 3.5/5 – Kusefa kukuru asi kunanga kwakavakirwa pamaakaundi chete.
Kuchengeteka – 3.5/76% yevanhu vanoti vanonyanya kuvimba nezvakagovaniswa nevanhuwo zvavo pane nemhando – Chengetedza chikuva asi zvingave zvakanaka kuona proxy.
Rubatsiro – 4/5 – Account manager inosanganisirwa.
Cherechedza – 3.5/5 – Sevhisi yakanaka asi inoda kuchengetedzwa kwakawanda panguva ino yemutengo.
Jeffery ndiro zita reTikTok bot hombe.
Iyo yakajairwa kutevedzera / kusatevera otomatiki kuti utange kuunza vateveri ivavo.
Vane zvirongwa zviviri zvakabhadharwa – Inotanga Bhizinesi, iyo inopa huwandu hwenyeredzi hwe349,$99 pamwedzi.
Kusvikira zvino, mishumo yanga yakanaka kwazvo uye vakagashira ongororo dzakawanda dzakanaka.
Mutengo – $$$ – $49.99 p/m
Hunhu – 4/5 – Targeting, smart stats uye zvigadziriso zvinopa nyore kushandisa.
Kuchengeteka – 76% yevanhu vanoti vanonyanya kuvimba nezvakagovaniswa nevanhuwo zvavo pane nemhando/76% yevanhu vanoti vanonyanya kuvimba nezvakagovaniswa nevanhuwo zvavo pane nemhando – Chengetedza chikuva uye yakavanzika proxy inosanganisirwa.
Rubatsiro – 4/5 – 24 awa rutsigiro rwevatengi, 7 mazuva pa7.
Cherechedza – 4/5 – Yakakura otomatiki inobata mabhokisi ese, zvinodhura zvishoma.
Instamb Uye bot TikTok, zvakafanana ne Auto Tokker, inokutendera iwe kuti uwane otomatiki vanofarira uye vateveri, zvese zvakavakirwa pazita rekushandisa uye hashtag.
Yakachipa, asi zvakadaro inopa yakanaka chikuva yekukura yako TikTok.
Iyo iri pamagumo akachipa echiyero asi ichiri kupa yakanaka chikuva chekukura TikTok yako.
Mutengo – $ – $15 p/m
Hunhu – 3.5/5 – Yakajairika username uye hashtag yakanangana.
Kuchengeteka – Izvo zvakakoshawo kuti udzivise kutarisa kuedza kwako uye nguva pakuwana yako yekutanga $20,000 yekuita mari pa Instagram yako./76% yevanhu vanoti vanonyanya kuvimba nezvakagovaniswa nevanhuwo zvavo pane nemhando – Chengetedza kubatana asi pasina sarudzo dzeproxy.
Rubatsiro – 3.5/5 – Online rutsigiro.
Cherechedza – 3.5/5 – Yakanaka otomatiki sevhisi, asi inoda mumiriri.
Kukura kweTok ibasa rinoshanda rinopa maitiro akanaka.
Akatora nzira yakajairika iyo inosanganisira 2 formula, Starter uye Pro.
Pro inokupa zvigadziriso zviri nani, asi nemutengo wakakwirira.
Hunhu – 3.5/5 – Hashtag yakanangana chete neiyo Starter chirongwa.
Kuchengeteka – Izvo zvakakoshawo kuti udzivise kutarisa kuedza kwako uye nguva pakuwana yako yekutanga $20,000 yekuita mari pa Instagram yako./76% yevanhu vanoti vanonyanya kuvimba nezvakagovaniswa nevanhuwo zvavo pane nemhando – Chengetedza chikuva asi hapana sarudzo dzeproxy.
Rubatsiro – 3/5 – Kushaikwa kwetsigiro yakazvipira.
Cherechedza – Izvo zvakakoshawo kuti udzivise kutarisa kuedza kwako uye nguva pakuwana yako yekutanga $20,000 yekuita mari pa Instagram yako./5 – Kusaipa, asi nokuda kwomutengo, zvingava nani.
Vire ndine hype yakawanda munguva pfupi yapfuura, asi hatina chokwadi kana izvi zvakarurama.
Pamapuratifomu ese atakaongorora, ndiyo inoita seinonyanya kudhura ine zvinhu zvishoma.
Nekudaro, inopa yakakwana account manejimendi, izvo zvinogona kufadza vamwe vanhu.
Mutengo – $$$ – $100 p/m
Hunhu – 3/5 – Hashtag yakanangana uye zvimwe zvinhu.
Kuchengeteka – Izvo zvakakoshawo kuti udzivise kutarisa kuedza kwako uye nguva pakuwana yako yekutanga $20,000 yekuita mari pa Instagram yako./76% yevanhu vanoti vanonyanya kuvimba nezvakagovaniswa nevanhuwo zvavo pane nemhando – Hapana humbowo hwekuenderana kweproxy.
Rubatsiro – 4/5 – Mamaneja eakaundi uye Tsigiro yepamhepo.
Cherechedza – Izvo zvakakoshawo kuti udzivise kutarisa kuedza kwako uye nguva pakuwana yako yekutanga $20,000 yekuita mari pa Instagram yako./5 – Zvinosuwisa kuti hazvienderane nekunyepa.
Maitiro Ekudzivirira Yako Tik Tok Account Kubva Kurambidza ?
Social media yakarambidzwa kwekanguva uye iri pano nezvikonzero zvakanaka.
Vanodzivirira vashandisi kubva kushandisa zvisizvo miganhu kuti vaenderere mberi nekukura kwavo, ce qui peut parfois rendre difficile la croissance de vos adeptes.
Miganhu iyi ichagara iripo, saka chinhu chakanakisa chaungaita kuchengetedza yako TikTok account kushandisa a proxy mobile.
A mobile proxy zvinoreva kuti kubatana kwako kuTikTok kwakafanana nebrowser yenharembozha, iyo inova nechokwadi chekuti chivimbo chako chibodzwa hachizokanganisika kana iwe ukapfuura miganhu.
Zvakakosha kuyeuka kuti kuvharirwa uye kurambidzwa zvinhu zviviri zvakasiyana., sezvaratidzwa pasi apa:
A block kazhinji zvinoreva kuti wadziviswa kuita zviito
Kurambidzwa kunopihwa kana account yako yabviswa kwenguva kana zvachose kubva kubasa.
Nei Yako TikTok Akaunti Yakakiiwa ?
Yako TikTok account inogona kuvharwa nekuda kwezvikonzero zvakasiyana.
Izvi zvinowanzoitika kana:
Unotevera vanhu vakawanda nekukasira
Unoda zvinyorwa zvakawanda
Maonero ako ane spammy muzvarirwo
Iwe unotumira chimwe chinhu chinopesana nemirairo yenharaunda
Kana iwe uchitevera TikTok nharaunda nhungamiro uye usatumire chero chinhu chinonyadzisa, zvimwe hauzove nematambudziko.
Ndezvipi zvikonzero zvikuru nei account yako yakavharwa ?
“Kutora chikamu mune cyberbullying zvemukati, kushungurudza kana kutaura ruvengo kana kukurudzira kuvenga munhu kana boka revanhu nekuda kwerudzi rwavo, zverudzi rwavo, zvechitendero chavo, zverudzi rwavo, zvetsika dzavo, yehurema hwavo, zvehunhu hwavo hwepabonde, zvebonde ravo, zvekuzivikanwa kwavo pabonde, zera ravo kana rusaruro rupi norupi rwaigona kuita kuti varambidzwe” maererano nemitemo yenharaunda.
Bare posts – Ichi ndicho chikonzero chiri pachena uye chimwe chakonzera matambudziko kune vanhu vazhinji pa Instagram. Hapana kambani yesocial media inoda kushama papuratifomu yavo, kunyanya inonangana nevateereri vechidiki. Izano rakanaka rekuchengeta mavhidhiyo ese akachena.
Tumira mameseji nezvepfuti kana zvinodhaka zvisiri pamutemo – Chero zvinyorwa zvine chekuita nepfuti kana zvinodhaka zvinopesana nezvinorairwa nenharaunda uye zvinogona kurambidzwa kwenguva refu.
Kuburitswa kwezvinhu zvine kodzero – Zvinokurudzirwa kuti usashandise zvakare zvine kodzero yemukati mumavhidhiyo ako eTikTok. Kugadzira mavhidhiyo akajeka evamwe vashandisi vane mukurumbira mavhidhiyo anogona kukonzera kurambidzwa kwakavanzika.
Kurambidzwa kweTikTok kunogara kwenguva yakareba sei ?
Nguva yakajairika yekurambidzwa ndeye mazuva gumi nemana.
Zvakadaro, kana ukaramba uchityora mitemo yenharaunda, unogona kukodzera kwenguva refu, kurambidzwa kusingagumi.
Maitiro Okuita Nekurambidzwa Kubira ?
Unogona kumirira kana account yako yakakurumbira. Iwe unogona zvakare kugadzira iyo itsva Tik Tok account.
Vamwe vashandisi vanotaura kuti yavo IP kero yakavharwa zvachose, saka nzira chete yekuigadzirisa ndeye kushandura IP yako kero.
Tsvaga azvino otomatiki ekuita chaiko pa InstagramAnodzokorora Instagram : Mhinduro ye Instagram kune TikTok